နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ကျနော်တို့ကဦးဆောင်ဦးရွက်နှင့်နည်းပညာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်ပို့, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမှာ ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းထုံးစံစုပေါင်းစုပ်စီမံကိန်းများအပေါ်ယူဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ နှစ်တွေကျနော်တို့အများဆုံးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်-on အချိန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်အတူအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များပေးအပ်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ ကျနော်တို့တရားမျှတတဲ့ဈေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များအမြန်ဆုံးပေးပို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအများအပြားဖောက်သည်တစ်ဦး "ကြိုက်နှစ်သက်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း" ဖြစ်လာကြပါပြီစတာတွေကမ္ဘာတဝှမ်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, အမေရိကန်, ကနေဒါ, ဥရောပ, အိန္ဒိယ, ဂျပန်ပေးစွမ်းပါသည်။
QABS-BK သည်ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်အသုံးပြုရန်အတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ABS ပလပ်စတစ်ဗဓေလသစ်ဖြစ်သည်.ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးထိုးခြင်းပုံသဏ္forာန်နှင့်သင့်လျော်ပြီးကြာရှည်ခံသည့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ABS ပလတ်စတစ်အစေးအဆင့်အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။.
မြင့်မားသောအတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင် finish ကိုအတူအနက်ရောင်ဗဓေလသစ်,ABS ပလတ်စတစ်အစေးသည်အကြမ်းအားဖြင့်ကုသမှုခံယူနိုင်ပြီးမြင့်မားသောသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်သည်.ဒါဟာ’ခိုင်မာမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စံပြ s
ABS’ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့်ဆေးထိုးခြင်းကိုပုံသွင်း။ ဆေးကြောနိုင်သောစွမ်းရည်သည်ယိုစီးမှုကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးဝင်သည်-စွန့်ပစ်ပစ္စည်း-လေ(DWV)ပိုက်စနစ်များ,တူရိယာ(အသံဖမ်း,ပလပ်စတစ် Clarinets,နှင့်စန္ဒရားလှုပ်ရှားမှုများကို),ဂေါက်ကလပ်အကြီးအကဲများ(၎င်း၏ကောင်းသောစျေးမှာစုပ်ယူ၏),မော်တော်ယာဉ်တိအစိတ်အပိုင်းများ,မော်တော်ယာဉ်ဘမ်ပါဘား,သွေး access များအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ,လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်စည်းဝေးပွဲများအတွက်ပူးတွဲ,အကာအကွယ် headgear,whitewater ကနူး,ပရိဘောဂများ၊,ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ,အသေးစားမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ,နှင့်ကစားစရာ,Lego နှင့် Kre အပါအ ၀ င်-အိုအုတ်၊.အိမ်သုံးနှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများသည် ABS ပလတ်စတစ်အစေးကိုအဓိကအသုံးပြုသည်.Keyboard keycaps များကို ABS plastic resins ဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.recycledplasticresin.com/my/abs-pellet.html